प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका सागर 'अक्सफोर्ड' बाट एमएस्सी पास (भिडियो)
You are at:Home»समाचार»प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका सागर ‘अक्सफोर्ड’ बाट एमएस्सी पास (भिडियो)
प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका सागर ‘अक्सफोर्ड’ बाट एमएस्सी पास (भिडियो)
काठमाण्डौँः बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ ! नीहुँ खोज्ने ! … ‘ली क्वान यु लाई सिंगापुरमा ढुंगा दिएको थियोःउले हिरा बनायो । तर नेपाललाई तपाईँको हातमा दिँदाखेरि हिरा दियमथ्योः अहिले ढुंगा बनाएर छोड्नुभयो ।’ बिबिसि साझा सवालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाले प्रश्न सोधेका थिए । प्रश्न थियो, “अरु देशमा पढेलेखेका उत्कृष्ट विद्यार्थी प्रधानमन्त्री छन् । हाम्रोमा अक्सफर्ड पढेको युवा कहिले प्रधानमन्त्री हुने ।”
त्यो प्रश्नमा आक्रोस मात्र हैनः पिडापनि थियो र निराशा पनि थियो । प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो देउबा झन जंगीए, ..’नीउ खोज्ने तपाईँ…? कहाँबाट ल्याउनु त यहाँ अक्सफर्ड ?” यही सवाल जवाफले ती युवालाई चर्चित बनायो । देउबाको बने लोकपृयता ओरालो लाग्यो ।
तीनै युवा सागर ढकालले अक्सफर्ड विश्वविद्यालयबाटै स्नातकोत्तर गरेका छन । उनले वाटर साइन्स पोलीसी एण्ड म्यानेजमेन्टबाट एमएस्सी पा गरेका हुन । उनी इन्जीनियर हुन् । उनले छिटै नेपाल फर्केर आफ्नो सिप र क्षमता देशको लागि खर्चने वाचा गरेका छन् ।